Ngwọta NetOps | Ngwa NetOps | Motadata
Nleba anya akụrụngwa & nleba anya
Ngwá ọrụ nlekota netwọkụ AI na-akwalite nke ukwuu
Chịkọta, nyochaa, chọpụta na mekọrịta metrik gị niile, mmemme yana data ndekọ na dashboard jikọtara ọnụ maka ịrụ ọrụ netwọkụ nwere ike ịgbatị na ntụkwasị obi.
Gbaa ngwa mara Ọrụ netwọk
Nyochaa akụrụngwa netwọkụ n'otu ikpo okwu echekwara maka nchọpụta nsogbu ngwa ngwa. Chịkọta metrik dị mkpa site na ngwaọrụ netwọk dị iche iche, firewalls, routers, switches, na ngwaike ndị ọzọ. Sochie Oge BGP, adjacencies OSFP maka mkpuchi nlekota netwọk sara mbara.
Ọhụhụ efu efu
Chọpụta okwu ma belata mkpọmkpọ ọrụ tupu ha ebute mmebi ọrụ site na nlekota oru netwọk.
Nweta mmekọrịta oge
Nyochaa LAN, WAN, netwọkụ ngwakọ, soro okporo ụzọ na usoro dị ka ndị ahịa kacha elu, usoro ojiji okporo ụzọ site na ngwa.
Igwefoto ọgụgụ isi
Mee ka mgbagwoju anya dị mfe site na ngbanwe nke ukwuu yana akpaaka na nyocha ML, nyochaa akụrụngwa netwọkụ na njedebe.
Nyochaa akụrụngwa netwọkụ yana mkpuchi sara mbara
Nleba anya Firewalls, switches, routers, ikuku ngwaọrụ, na ihe ndị yiri ya.
Nweta nyocha nke omume okporo ụzọ zuru ezu site na iji nlekota netwọkụ Flow gụnyere Netflow v5/v9, jFlow, sFlow, IPFIX na ndị ọzọ.
Nyochaa ụkpụrụ ụzọ ámá gụnyere EIGRP, OSPF, LDP, BGP, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Maapụ topology dị egwu maka nyocha ihe kpatara mgbọrọgwụ wee jiri anya nke uche hụ ọkwa n'oge.
Chọpụta ngwaọrụ netwọk n'ofe ụdịdị dị iche iche. Jiri ndebiri netwọkụ akọwapụtara eburu ụzọ malite na nkeji.
Nyochaa Ọgwụgwụ ruo Ọgwụgwụ akụrụngwa netwọk iji hụ na ọhụhụ ọrụ zuru oke
Nyocha arụmọrụ zuru ezu yana nleba anya akụkụ anọ nke metrik, ndekọ, ọnyà SNMP, na data Flow Network.
Nyochaa ahụike okporo ụzọ n'etiti njedebe ọ bụla dị ka ọdụ ụgbọ mmiri, PID, ngwa, ma ọ bụ adreesị IP.
Wetuo oghere visibiliti site n'ịkwakọba ngwa ọrụ niile n'ofe ụlọ ọrụ.
Sochie matries igodo dị ka mbufe TCP, churn njikọ na latency.
Belata MTTR site n'ịchọpụta ihe kpatara ya site n'izi ezi ezi. Jiri okirikiri nyochaa mmemme na ihe adịghị mma iji tụọ mmetụta ọrụ ahụ.
Tụgharịa mkpebi teknụzụ ọ bụla ka ọ bụrụ mkpebi azụmaahịa
Melite arụmọrụ netwọkụ iji wepụta ahụmịhe onye ọrụ dị elu. Belata mmebi SLA na oge nkwụsị.
Jiri atumatu anomaly na isi data iji chọpụta mgbama sitere na mkpọtụ.
Welite arụmọrụ arụmọrụ site na iji oge netwọk nwere ike ịkọ amụma oge niile.
Wepụta ọrụ n'ihu na-adabere na nbibi ọrụ nwere ike iji nlekota netwọk na-ahụ maka ọrụ.
Kwado injin runbook akpaghị aka ka ọ mee ihe ozugbo ma ọ bụrụ na ọ daa n'ụkpụrụ nkịtị.
Wepụ uru kacha mma n'aka gị Ụdị ọrụ IT
Nlebanya enweghị nkebi nke ụlọ ọrụ
Chịkọta mmemme, arụmọrụ, mbipụta na ndekọ data sitere na gburugburu netwọkụ kesara, nchekwa, ngwa, ọrụ, wdg.
Idozi nsogbu netwọkụ
Nyochaa netwọkụ ahụ na usoro ntọala na amụma amụma iji dozie okwu tupu ha emetụta azụmahịa ahụ.
Mkpu na ọ dị mkpa
Bifurcate ọkwa dị mkpa na-emetụta azụmahịa gị megide ọkwa na-emetụtaghị ọrụ.
Nweta Nghọta Actionable
Gwakọta data sitere na ọtụtụ isi mmalite wee bute mmemme akọwapụtara ọrụ.
Jiri anya nke uche hụ usoro omume
Nyochaa, tulee ma mekọrịta netwọkụ, ngwa ma ọ bụ ọkwa ọrụ iji hụ na oge ọrụ ga-adị.
Akpaaka dị elu & nyocha
Tinye akpaaka na AI-Driven Analytics maka netwọkụ site na interface jikọrọ ọnụ.
Nyochaa arụmọrụ netwọkụ maka netwọk emelitere.
Na-ejikọta akpaaka netwọkụ maka nleba anya ka mma...
6 Nleba anya netwọkụ kacha mma nke IT Te ...
Nleba anya netwọkụ ka ghọrọ nke ọma, kwalite...